IVuzix Blade 3000, iiglasi zelanga ezinobunyani obungathandekiyo | Iindaba zeGajethi
IVuzix Blade 3000, iiglasi zelanga ezinobunyani obungathandekiyo
Kanye xa inyani ebengezelelweyo ibonakala ngathi iyaqala ukuthatha inxaxheba, uninzi lweenkampani ezibonakalise iiprojekthi ezinkulu kwinyani ebonakalayo, eyenze ukuba indawo enkulu yoluntu ijonge kule teknoloji, iyenza loo nto, nangona kusekho iinkampani ezisebenza kuphuhliso. , inyani eqinisekisiweyo ithathe isitulo esingasemva, ethi ekugqibeleni ibandakanye izixhobo ezimbalwa kunye namaqela amancinci asebenza kolu hlobo lwetekhnoloji.
Nangona kunjalo, kwaye ngaphandle kokuba iinkampani ezinje ngeGoogle zibonakala ngathi ziphulukene nomdla kwinyani eqinisekisiweyo, zininzi iiprojekthi ezinomdla kakhulu eziqhubekayo, ezinye zazo zikhulile njenge IVuzix Blade 3000, uhlobo lwezibuko zelanga ezikrelekrele apho abadali babo bekwazile ukudibanisa konke ukubanakho okwenyaniweyo okwenyani kunamhlanje kwisixhobo esinye. Ukuba unomdla kule projekthi, xelela ukuba, ngokusemthethweni, baya kuboniswa ngexesha lokubhiyozela i-CES 2017 ezayo.
IVuzix Blade 3000 iiglasi zamehlo ezisebenza ngendlela efanayo neyewotshi efanelekileyo.
Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, njengoko abadali beVuzix Blade 3000 bephawula, sithetha ngesixhobo esikwaziyo ukubonisa umsebenzisi I-HUD eyiyo malunga nelizwe lokwenyani elinolwazi olukhutshwe kwiselfowuni abadityaniswe kuyo. Njengoko ngokuqinisekileyo uya kuba uqikelela, ezi zibuko zelanga zibonelela ngokusebenza ngokufana newotshi ebukhali, ukuze nabani na ozinxibileyo anganyusi ifowuni epokothweni enze uthotho lwezenzo.
Ukuze i-Vuzix Blade 3000 ihambe, imoto eyaziwa ngegama lika ICobra II kunye Itekhnoloji yokujonga ubunini evumela ukubonisa lonke ulwazi lwefowuni malunga nelizwe lokwenyani. Njengazo zonke iikhonsepthi ebezinikwe ngaphambili, iVuzix Blade 3000 ixhotyiswe ngekhamera yokucacisa okuphezulu, iisenzi zokujonga umkhondo wentloko yethu okanye iphedi yokubamba ukuhamba kwiimenyu ezithile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » IVuzix Blade 3000, iiglasi zelanga ezinobunyani obungathandekiyo
Izibuko zelanga ezineelensi ezicace gca ezicacileyo
Kwangokunjalo bekuza kuphawulwa ngeglasi zelanga ziilensi ezibonakalayo? Ewe, ngaphandle kwezibuko zelanga abaxabisekanga kwaye bajonge kwinto ebebesenza ngayo iiglasi zelanga, ke njenge-AR azizukuphangela